Nakuba abantu abaningi abaye balizwa izwi "damper", ukuthi umkhiqizo onjani, akubona bonke uyazi. Kodwa le divayisi cishe kuyo yonke indawo esizungezile. Ngakho umuntu ukuthola lapho damper nokuthi uthanda?
Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi izwi German "damper" kusho "okokunciphisa umsindo thulisa." Ngokwengxenye enkulu, kule divayisi uhlobo ukushaqeka mfutho, esiklanyelwe ukuvimbela kunyakaza eziphakamayo ezahlukene izinhlelo, amadivaysi, imishini, izakhiwo kanye izakhiwo ngesikhatsi operation yabo. Njengoba kuchaziwe Ngomqondo obanzi, inkulumo ethi "damper"? Lokho-ke kulula kakhulu ukuba baqonde, ngoba wonke amadivayisi ukuthi basuke ekusiza futhi smyagchayusche kungenziwa ngokuthi yilo eside.
Cishe noma yimuphi umkhiqizo noma idivayisi yakhelwe nokunciphisa into ebizwa dampers. Ziyakwazi lapho ngobuningi. Futhi abavamile kakhulu iraba gasket kungenziwa ebizwa nge- "damper". Kuyini lokhu kudivayisi ngomqondo ezijulile, kuyokhanya emuva kokucubungula izinhlobo zalo eziyisisekelo. Dampers kukhona womoya kanye wokubacindezela. Kulokhu, lapho kukhona izinhlobonhlobo eziningi. Ngakho, wokubacindezela ihlukaniswe:
okusizwa ukushaya dampers;
isando amanzi mufflers;
Ngokuvamile njengoba asetshenziswe amadivayisi wokubacindezela zalolu hlobo, ulwelwesi, ibhaluni noma piston gidroakkumulyarory,
Izindawo dampers isicelo
dampers womoya kanye wokubacindezela esetshenziswa amathuluzi wokulinganisa, abalawuli othomathikhi, izinhlelo wokubacindezela. Damper izinkampani esetshenziswa imishini kagesi (ikhoyili). It kuvimbela waba ukwanda okukhulu kwezincwadi voltage. Kwenza ukuguquguquka of Imisinga wesifunda usuke phakathi short circuit. Ukuthuthwa mgwaqo futhi esetshenziswa damper. Kuyini lokhu kudivayisi emshinini? I elengayo izimoto ezahlukene usebenzisa ukushaqeka kakhulu, okuyinto, empeleni basuke Damping amadivaysi.
damper Esisemqoka (okuyinto e Avionics)
Avionics Modern ayikwazanga isebenze ngaphandle damper kunyakaza aeroelastic. Okuhlangenwe nakho kwabo ngamunye izindiza. A damper ngoba Damping oscillations lezivakashi e indiza ngokuzenzakalelayo. Kulokhu, indima yayo kubaluleke kakhulu, ngoba kuyadingeka ukuze avimbele Ukwakha-up of the izindiza, okuholela overload ubhubhise konke ngamacebo akhe. a damper okunjalo wuhlelo izinzwa gyroscopic, okuyinto ukulawula ukufuduka emincane kwendiza, i-electronic ukucutshungulwa wesifunda, futhi signal okhulisa. Kodwa lokhu akulona uhlu oluphelele izici kudivayisi. Usese ukubulawa amayunithi kufakwe umshini ukulawula wiring ezilawula damper. Inikeza umshayeli? Ngenxa lezi zimpawu amayunithi damper akuhlangani kanye neminye imisindo ACS (othomathikhi indawo elawula uhlelo).
Ezinye izinhlelo zokusebenza dampers
Ukusetshenziswa kabanzi kakhulu zalezi amadivayisi ohlelweni acoustic, eyaziwa ngokuthi amakholomu. Kulokhu, lo damper kuyinto indandatho inamathela diaphragm ukuze uzimele. Ezimweni eziningi, ukwenziwa imikhiqizo efana asetshenziswa izinto polymeric (ngoba amaza okusezingeni eliphezulu), Foam iraba (kokuphakathi ongaphakeme). I damper isetshenziswa angaqeda asalile oscillations umsindo ulwelwesi. Futhi, lezi amadivaysi azinakusilela womshini zomculo ezinezintambo zomculo. Kulokhu, lo damper yidivayisi okuhlose manzi kunyakaza yezinhlamvu. Siqukethe emapheshana eziningana (ihabhu) kanye kolodochek (ngesikhathi upiyano). Benta kahle kakhulu okleivayut Filz (soft wazizwa).
I izakhiwo eziyinhloko we damper
Omunye izakhiwo ezibalulekile zale divayisi ubhekwa wehlise Q (oscillating uhlelo nemingcele). yokusebenza isimiso sayo sisekelwe yokudlulisa amandla okuyoholela ekubhujisweni we damper metal noma ukushisa.
Nale divayisi, avame ihlangabezane bamabhayisikili. Ngandlela-thile ukwazi kahle ukuthi uhlobo self ayo damper. Kuyini le ngxenye? Ezimweni eziningi, kuba nezinkinga nale divayisi lapho ishayela emgwaqweni esingemnandi noma okungafanele. Ngakho umgibeli uqaphela ukuthi ngaphambili isondo libhayisikili iqala 'ukuhamba ", futhi isondo is baphambukisa nangapha, okuvame ukuholela ukuwa. Isizathu salokhu inkinga ukungapheleli isithuthuthu yesimanje. Ukunciphisa le nkinga nokufaka damper, okuyinto tube egcwele uwoyela. It has a induku piston ngaphakathi. NgoLwesine kutholakale isidumbu sendoda idivayisi unamathele uzimele. Induku ixhunywe phambi ekuphambukeni. Ethandwa kakhulu phakathi Bikers kukhona telescopic futhi rotary eziqondisa damper. Ngo ngemgwaco, kukhona enye inguqulo zale divayisi. Damper eziqondisa yokubeka - kuba njalo ukushaqeka mfutho amabili-indlela isenzo. It is fixed ngendlela ekhethekile. It ibekwe phezu yokubeka ayo phakathi emzimbeni wakhe izinduku. Ngokuvamile, lolu hlobo idivayisi kungatholakala SUV. Siyabonga kuye, isondo somshayeli eziqondisa akusho gxuma ungene izandla, ngisho nalapho ushayela phezu kwamatshe, imigodi futhi imigodi. a damper okunjalo isetshenziswa ezingemuva wheel drive izimoto ukuthuthukisa azinze.
Ukusebenzisa idivayisi umkhakha ifenisha
Cishe bonke iKhabhinethi ifenisha yesimanje esetshenziswa ifenisha damper. Kuyini lokhu? Amadivayisi anjalo eziklanyelwe mikhiqizo. inhloso yabo - ukwenza ukuvula kanye nokuvala iminyango ngangokunokwenzeka onokuthula bushelelezi. Babuye elisetshenziswa enezinto ukuthi uvule phansi. Ifenisha dampers zakhiwe yesimanje, ephezulu amandla izinto.
Kanjani ukuthambisa zamanzi ukusetshenziswa ekhaya?